कस्तो होला सरोज खनालको ‘पञ्चायती’ शासन ? « Ramailo छ
कस्तो होला सरोज खनालको ‘पञ्चायती’ शासन ?
‘पञ्चायती’ शासन ०३१ सालतिरको एउटा गाउँको कथालाई फिल्म बनेको छ । आगामी चैत २ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म कस्तो छ त ? यसका निर्देशक तथा निर्माताले आफ्नो भनाई राखेका छन् ।
‘व्यापारिक सफलता पाउला नपाउला । तर पंचायतले इतिहास साक्षी राख्ने काम भने पक्कै गर्छ’, निर्माता शुसान्त श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अमेरिकाको अवार्डले नै संकेत दियो, एकपटक इतिहासलाई वर्तमानमा ल्याउन पाउँदा खुसी छौं ।’ शिवम अधिकारीको लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्ममा नायिका नीता ढुंगाना र अभिनेता सरोज खनालको मुख्य भूमिका छ ।
‘पञ्चायत, जसले त्यो कालखण्डको पत्याउँनै नसकिने इतिहास हेर्न पाओस्, लेखक तथा निर्देशक अधिकारी भन्छन्, सात वर्ष अघि बनेको क्रिप्ट आज आएर पर्दामा उतार्नु चानचुने कुरा होईन । झोलापछि दर्शकले मौलिक फिल्म फिल्म हेर्ने चाहानालाई पञ्चायतले पुरा गर्ने समेत निर्देशक अधिकारीको बताउँछन् ।
पचास वर्ष अघिको शासन कालको नदेखिएको र नलेखिएको कथा पंचायतमा रहेको प्रस्तुतकर्ता गणेश गिरीको दाबी छ । के छ त त्यस्तो ? ‘त्यो हेर्न चाहिं चैत २ नै पर्खनुपर्ला’, गिरी भन्छन् । तर फिल्मको प्रोमो हेर्दा ‘पञ्चायत’ छाउपडी प्रथा र पहिलो महिनावारी हुँदा महिलाले भोग्नु पर्ने पिडाको कथा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । ‘आखिर यो पंचायतले पनि हेरोस् मेरो मृत्युको तमासा’ ट्रेलरको यो सम्वाद कारुणीक छ ।
शंकर सुवेदीको समेत लगानी रहेको पञ्चायतमा नायक सरोज खनाल, नायिका नीता ढुंगानासँगै रुपा राना, जाहान्वी बस्नेत, गीता अधिकारी, गणेश गिरी, विशाल पहारी, राजुबाबु श्रेष्ठ लगायतको अभिनय छ । फिल्ममा रंग पत्रकार रवि अधिकारी कार्यकारी निर्माताको रुपमा रहेका छन् । प्रोमो हेर्नुस :